❤️ Maitiro ekuwedzera nyaya pa Instagram - Facebook
Kusvikira zvino, paigara paine kuvhiringika nezvekuti ungaisa sei Instagram Nyaya. Kana iwe ukatumira nyaya yako yekutanga kwechinguva, unogona kubaya + mumufananidzo wako uye unogona kuwedzera foto kana vhidhiyo pfupi kunyaya yako.
Asi kana waita izvozvo, iyo + inonyangarika. Saka unoita sei kana uchida kuisa imwe nyaya ?
Kutenda kune itsva Instagram update, nyaya iyi yambogadziriswa. Ikozvino zvave nyore uye zvakanyanya kujeka kuburitsa nyaya, uye kune nzira nhatu huru:
Bata + chiratidzo sezvaratidzwa pamusoro – zvinogoneka chete kune imwe nyaya itsva
Swipe kubva pane yako post
Tinya chiratidzo chekamera kumusoro kurudyi.
Instagram zviri pachena yakabvuma kuti vashandisi vayo, kunyanya vanhu vasina Vanoda Instagrammers, akanzwa kuvhiringika kukuru. Kana iwe uchida kukurumidza kuona kweimwe nzira, tarisa gwara redu rezvikamu zvitatu pazasi.
Instagram nyaya kubva pamufananidzo wepikicha
Iyi yakanaka yekutumira nyaya inokurumidza, asi inoshanda chete kana usati watumira nyaya yapfuura mumaawa makumi maviri nemana apfuura. Iwe unogona kushandisa nzira iyi kubva kune yako feed kana peji peji.
Ingobaya pikicha yako ine + chiratidzo.
Iwe unogona ipapo kutora foto kana vhidhiyo kana kurodha imwe.
Wobva wadzvanya pane Yako nyaya pazasi kuruboshwe uye nyaya yako ichaburitswa.
Tumira nyaya ine swipe kurudyi
Chagara chiri chimiro, asi kana usingazivi kuti chiriko, akaoma kuwana.
Ingo dhonza zvakananga mukudya kwako.
Tora mufananidzo kana kuisa kubva muraibhurari.
Tinya pane nyaya yako pazasi kuruboshwe uye ichaburitswa.
Tumira nyaya nekudzvanya pakamera kumusoro kurudyi
Ichi chinhu chikuru chitsva kubva pa Instagram uye zvinoreva kuti vanhu vanogona ikozvino kutumira nyaya nenzira inonzwisisika.. Iwe unogona kuita izvi kubva pane yako post.
Kubva pane yako post, ingobaya chiratidzo chekamera kumusoro kuruboshwe.
Sarudza mufananidzo kana vhidhiyo yekushandisa.
Dzvanya pane yako nyaya uye nyaya yako ichaburitswa
Chakanakira nzira mbiri dzekupedzisira mune rondedzero ndechekuti iwe unogona kuzvishandisa kuwedzera imwe foto kana vhidhiyo kune yako nyaya, kunyangwe iwe wakatoisa imwe. Iyo yekutanga nzira haishande kana iwe uchitova ne Instagram Live Nyaya.
Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa InstagramNdeipi nguva yakanakisa yekutumira pa Instagram ?
Tsvaga azvino otomatiki ekuita chaiko pa InstagramNdeapi Akanakisa Instagram Bots muna 2020 uye Maitiro Ekuchengetedza Akaunti Yako Yakachengeteka?